Umtshato ngendlela yokuvuna
Ukuba isibini esitshatileyo sifuna ukubamba umtshato wabo wokuzola, ukuzithandana nokungaqhelekanga, ngoko ke indlela yabo yomtshato njengesivuno sinokufaneleka. Igama elithi "isivuno" ngesiFrentshi lithetha "elidala". Kwaye ke umhla womtshato kwisimboli sevini uya kubonakala njengengqungquthela emnandi yobudala.
Ukuqhuba umtshato kule ndlela ufuna i-entourage efanelekileyo. Kwaye, ke, ukulungiselela le holide kufuneka kuqale ngokuveliswa kwememo yomtshato. Iindwendwe kufuneka zithole i-postcard egugile, ephuziweyo, ngeklasi ephaphakileyo, mhlawumbi kunye nezitampu ezindala kunye nokubhalwa kwimiyalezo ebhalwe kakuhle kwi-curls kunye neetsika.
Ukuba abasandul 'ukutshata banethuba, njengokuba imoto yomtshato iyona nto ingcono ukusebenzisa imoto enqabileyo enqabileyo. Kwiidolophu ezinkulu kukho rhoqo inkampani enika imoto ngokuqeshisa iiholide ze-Retro.
Kulo gumbi apho kuza kubanjwa umthendeleko wesidlo, kubalulekile ukulungiselela ubukho bezifundo ezahlukahlukeneyo ezivakalisa izihloko zomtshato. Kusuka kwipenitshala ingaba zihlalo ezithambileyo kunye ne-backholstery okanye i-fenitshala endala. Iidyuli zasendulo zihlotshiswe ngezimbali ezilula kwiimpawu zangasese ezingaqhelekanga, umzekelo, okanye iipases. Iingubo okanye iifake ezisikiweyo, iincwadi ezindala okanye iifowuni ezinemifanekiso emnyama neyemhlophe, eyenziwa mandulo okanye imandulo yamandulo. Kwakhona ehholo unokuxhoma izibuko uze utshise ukukhanya.
Impahla kunye nezixhobo
Ingqwalasela enkulu xa uhlela umtshato kwisitayela sevini, ngokuqinisekileyo, kufuneka unikezwe kwiingubo zabathengileyo besikhathi esizayo, ukunika umbala okhethekileyo wokubhiyozela.
Ngokubhekisele kwengubo yomtshakazi, kufuneka ibe yembatho yokuvuna ekhethekileyo, epheleleyo yothando. Ezi zambatho zingathengwa njengevenkile engabonakaliyo kwiingubo zokuvuna okanye kwivenkile ye-intanethi, kwaye ifunyenwe kwi-wardrobe kagogo okanye umama. Ukubeka ingqalelo kwiingubo ezingabonakaliyo zokuvuna akusikho konke oku kuthetha ukuba kufuneka kuhlawule iindleko eziqhelekileyo okanye ezifashini zanamhlanje. Iingubo zokuvuna zivama kakhulu, kodwa xa kuthelekiswa nompatho womtshato, kuthengwa kwi-salon yomtshato yesimanje, ukuthenga ingubo yokuvuna izakugcina imali. Nangona iingubo zincinci kakhulu, ziyakutyelwa kwi-workshop ekhethekileyo.
Ukuqonda ukuba isitayela sokuvuna sisembathweni, unako, ngaphandle kokusebenzisa ulwazi olufumaneka kwi-intanethi, ubukela iifilimu zamandulo, iifoto kunye neposikhadi zeminyaka edlulileyo, tyelela iintetho zemyuziyam.
Ingubo yomtshakazi ingaba imodeli yefashini yomkhosi wama-Victorian, kunye nama-70 okanye ama-80 ekhulwini lokugqibela. Akunjalo okokuba ingubo imele ibe mhlophe. Okukhethwa ngakumbi kukuba imibala eguqulwayo ye-pastel - i-champagne iqhuma, ikhofi kunye nobisi okanye abanye.
Ukongezelela kumfanekiso wesibhambathisi sokuvuna, kufuneka ukhethe iifowuni ezifanelekileyo-iiglavu ze-lace, isitya kunye nesigqubuthelo okanye isigqubuthelo, amasitokethi kunye nezihlangu. Imihlobiso kufuneka kwakhona yenziwe kwiintsuku zakudala.
I-bouquet for the bride is best found without the frills kunye nokusetyenziswa kwamagqabrijini anamhlanje xa uyidala. Kumele ibe yithobekile kwaye ilula, ilula kwaye ihle.
Ukuze i-suit yomyeni ifumane kwijekethi kunye neebhulukhwe kunye nekhati yeetoni ezizolileyo, kunye nezicathulo, ezihambelana nexesha elikhethiweyo, liya kufikelela. Njengeenkxaso zokuvuna, ukuba unqwenela, ungasebenzisa i-waistcoat okanye isitya esifanelekileyo, kwaye, ngokuqinisekileyo, iqhosha elincinci, ibhabhathane okanye ityayi.
Ukulungelelanisa ngokufanelekileyo umtshato kwindlela yokuvuna, abatshangatshangayo baya kuba ngumzekelo wobuhle kunye neentle. Into ephambili kukuqwalasela zonke iinkcukacha ekuhlobiseni iholide kwaye uzigcine ngomfanekiso omnye.
Umtshato ngesitayela esithi "Alice in Wonderland"
Umtshato kwisitayela se-disco
Umtshato kwi style Style
Udliwano-ndlebe nombonisi weTV u-Masha Yefrosinina
Isiseko soNcedo lokuQala
Iincoma ezintle kwiintombazana
Ndingayimisa njani inwele emva kokubeletha?
Umvuzo kunye nabasebenzi: inzuzo kunye nokungalunganga
Ukuhlanjululwa kwiKrisimesi kwiibhuthi kuyindlela efanelekileyo yokwazi i-destiny yakho
Intombazana yentwasahlobo: Indlela yokugqoka iimpahla zothando ngo-2017
Ukucocwa ngokubanzi kwezindlu, iimveliso zokucoca
Isobho seKonon kunye nenkomo kunye no-anyanisi
Yintoni i-MOP Cream?
I-Recipe ye-Garlic kunye neCakes Isonka
Kutheni amantombazana ahlala esithandana neengxabano
Iimpawu zesikhumba ejikeleze amehlo
Inkukhu e-marinade enezonka
Iifomthi ze-salmon ezihlanjwe